Isiqinisekiso - Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
1. Inkonzo Yolondolozo
(1) Isiqinisekiso: Ngeminyaka eli-1 ukusukela ngemini owathenga ngayo imveliso, ukuba kukho nasiphi na isiphoso, siya kubonelela ngenkonzo yolondolozo lwasimahla.
(2) Ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngelixa usebenzisa iimveliso zethu, nceda unxibelelane nathi ngomnxeba, ifeksi, i-Skype, i-WhatsApp, iViber okanye i-imeyile kwaye siza kuphendula kungaphelanga iyure enye kwaye sisombulule iingxaki zakho ngokukhawuleza.
(3) Sithatha ixabiso lomgangatho weemveliso zethu phantsi kwesiqhelo. Ukuba umgcini akasileli, sinika ulondolozo lwasimahla. Emva kwethuba lewaranti, siya kuhlawulisa kuphela ixabiso leendleko zezinto zokugcina. Isikhokelo sobuchwephesha simahla kubomi bonke.
(1) Uqeqesho lobugcisa:
Kuya kubakho incwadana yomsebenzisi okanye ividiyo ekunceda ukuba ufunde umatshini, indlela yokufaka, ukusebenza, ukugcina umatshini, ngaphandle koko, kuya kubakho iqela lenkonzo emva kokuthengisa elinikezela ngeenkonzo ezingama-24 kwi-Intanethi.
(2) Uqeqesho lwezonyango:
Iziko loqeqesho lobuhle laseZohonice limiselwe ukutyelela abathengi. Unokufumana isikhokelo soqeqesho lweklinikhi esivela kuGqirha okanye kwi-beauticians, ungaluthatha olu qeqesho nge-imeyile, ngomnxeba nangezixhobo ezikwi-Intanethi, njl.